मालदिभ्समा ‘महाभारत’, भारतलाई धर्मसंकट
Mon, Aug 20, 2018 | 16:56:32 NST
13:11 PM (6months ago )
Total Views: 19.7 K
माघ २३ – मालदिभ्समा बढ्दो राजनीतिक गतिरोधका बीच राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले १५ दिनको संकटकाल घोषणा गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएदेखि नै मालदिभ्सको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । राष्ट्रपति यामीन आफ्नो पूरा शक्ति प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउन लागि परेको बताइन्छ । विपक्षी नेतालाई विस्तारै विस्तारै जेल हालेर सत्ता केन्द्रिकरणमा उहाँ लाग्नुभएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भने उहाँले दबाब महसुस गरेका छन् ।
संकटकाल घोषणासँग राष्ट्रपति यमीनले आफूसँग कुनै अन्तिम उपाय नभएको महसुस गरेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति माहेम्मद नशीदले यस फैसलाको आलोचना गर्दै यसलाई सत्ता परिवर्तनको संकेत बताएका छन् । अब्दुल्ला यामीनसँग अरु कुनै उपाय पनि थिएन । उनले दोस्रो पटक फेरि नशीदलाई सत्ता सुम्पिदिएमा उनीविरुद्ध कारबाही हुने थियो । तर अब सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।
यसैका साथ विपक्षी नेता एकजुट भैरहेका छन् र उनीहरु मिलेर के कदम उठाउँछन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
मालदिभ्समा बढेको राजनीतिक गतिरोधमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नशीद र यमीनको बीचमा रस्साकस्सी चलिरहँदा भारतले पर्दा पछाडिबाट आफ्नो भूमिका खेलिरहेको थियो ।
कतिपयले आलोचना पनि गरेका थिए जब लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएका नशीद सरकारलाई हटाइयो, त्यस समयमा भारतले उनलाई खुलेर समर्थन गर्नुपर्थ्यो । तर भारतले त्यसो गरेन । लोकतान्त्रिक शक्तिको रक्षाका लागि भारत मुख खोलेरै अगाडि आउनुपर्थ्यो ।
तर यसमा भारतको आफ्नै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । जसरी भए पनि भारत यो चाहँदैन कि मालदिभ्स पूरा रुपमा चीनको निकट पुगोस् । तर अहिलेको अवस्था यस्तो बनिरहेको छ कि भारतले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । भारतसँग अरु थुप्रै उपाय भए पनि उसले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
के चीनले यमीनको साथ देला ?
संकटकाल लगाएपछि अब्दुल्ला यामीनसँग के छ त विकल्प ? यस विषयमा अब हेर्न बाँकी यो छ कि मालदिभ्सले बाहिरी दबाबलाई कसरी सामना गर्छ ?
यामीन सोचिरहेका होलान् कि जब चीनसँगको निकटता बढाएमा चीन उनको पक्षमा उभिनेछ । तर यो पनि हुनेछ कि चीनसँगको निकटताले भारत र पश्चिमा देशले मालदिभ्सविरुद्ध दबाब बनाउनेछन् ।
तर उनले चीनको रणनीतिलाई गलत बुझेको पनि हुनुपर्छ । वैश्विक शक्तिविरुद्ध चीन एक्लै मालदिभ्सको पक्षमा उभिन आउनेछ । तर त्यस्तो हुने एकदमै कम सम्भावना रहेको छ । मालदिभ्सको पक्षमा उभिएर चीन बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति यामीनसँग पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प देखिएको छनै ।
–बीबीसी हिन्दीमा अन्तराष्ट्रिय मामलाका जानकार हर्ष पन्तले व्यक्त गरेको विचार